Magetsi Wiricheya Kubatsira - Zvirinani pane Manual Mawiricheya?
Mawiricheya kazhinji zvakagadzirwa zvakakosha sezvo zvichipa rutsigiro kuvanhu vasingachakwanise kutenderera vega. Kune chikamu chikuru, iwe unogona kuwana 2 dzakasiyana mhando dze Mawiricheya pamusika, bhuku rekushandisa nemagetsi wiricheya. Mukati meaya maviri mapoka, pane anopfuura mazana mashanu emarudzi akasiyana ezvigaro zvekusarudza kubva. Sarudzo inoenderana nerudzii rwetsigiro yaunoda zuva nezuva.
Munguva pfupi yapfuura, kwave kune spike mukufarira kwemagetsi Mawiricheya; izvi zvinodaro nekuti zviri nyore kuwana kuburikidza neinishuwarenzi (kana iwe uchikodzera) uye hazvidi chero simba rinoshandiswa kana richishandiswa nekuti bhatiri rinoipa simba. Izvo zvakagadzirirwawo kuve neyakagadzikana kwazvo zvigaro pekugara uye upholstery, yakanyatsogadzirirwa kugara kwenguva refu.
Electric Mawiricheya yeKushandiswa kwehurema
Kunyangwe magetsi Mawiricheya dzave kunyanya kufarirwa sekupedzisira, iyo wiricheya yemawoko ichiri yakakurumbira mumakamuri echipatara uye zvimwe zvivakwa zvakafanana nekuti zvakajairwa chinja varwere mukati nekubuda pamibhedha uye kune mamwe maradhi ekurapa. Mawiricheya pakutanga dzaizivikanwa uye dzaibatsira nevanhu vaitambura neporiyo. Mazuva ano, magetsi Mawiricheya inogona kushandiswa kubatsira vanhu vane hurema hwakawanda hwakasiyana kusanganisira paraplegia, quadriplegia, spina bifida, kufutisa, uye zvimwe zvirwere.
Ndapota tipei mamwe mashoko: wiricheya yemawokoWiricheya yakamiraProduct InquiryReplacement Parts